सायद आमा - आमा र दुनिया मा मनपर्ने व्यक्ति। आफ्नो भावना मात्र होइन खरीद वरदान हुन सक्छ बारेमा उनको भन्नुहोस्, तर पनि हस्तनिर्मित बागाटेल। तर आमा को लागि शिल्प कसरी सुन्दर र किफायती बाहिर गरिएका कि बनाउन? यो पैसा बारेमा सबै अक्सर छ। विशेष गरी यो अझै पनि आफ्नो आय नगर्ने छोराछोरीलाई सम्बन्धित छ।
लेख के को उदाहरण दिन्छ आमा को लागि एक उपहार त्यहाँ घर नै छ भन्ने तथ्यलाई को बनाउन सक्छ। म पहिले नै निश्चित धेरै सामाग्री छु र तपाईं तिनीहरूलाई पैसा खर्च छैन। कुनै पनि मामला मा, यी शिल्प पनि पर्याप्त खर्च एक बच्चा छ, सस्तो हो। यदि तपाईं प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईं एकदम सभ्य कुरा हुनेछ।
आमा बनाउन शिल्प जो निर्धारण
सबै को पहिलो, तपाईंले एक उपहार विचार निर्णय गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ माथि हतार र पहिले मास्टर वर्ग पायो मा बुझ्न कुनै आवश्यकता छ। तपाईं शिल्प बनाउन को लागि पर्याप्त कौशल र समय कि विचार गर्नुहोस्। छैन कम्तिमा महत्त्वपूर्ण सामाग्री छन्। ठूलो तिनीहरूले पहिले नै को उपस्थिति मा घर मा छ भने, वा कम से कम तिनीहरूलाई किन्न सक्नेछन्।
आफ्नो आमा फूल प्रेम गर्दछ भने, यो कहिल्यै सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो हुनेछ कि मूल नरम फूलगुच्छा दिन तार्किक हुनेछ। तपाईं कसरी सी थाहा छैन? एउटा सुन्दर बनाउन आफ्नो हातमा फूलदान। क्यान्डी र अन्य उपहार संग मिठो टूथ हात आयोजक। आफ्नो आमा एक हट कार्यालय मा काम गर्दछ भने, तपाईं शायद यो तपाईं एक प्रशंसक दिइएको मूल्यांकन गर्छौं। जो कोहीले वर्तमान संग पूरक सकिन्छ घर पोस्टकार्ड न्यानो शब्दहरू।
आमा को लागि कागज शिल्प कसरी बनाउने विचार गर्नुहोस्। यो धेरै सजिलो र रमाइलो छ। हस्तनिर्मित कार्ड बाहेक खरिद भन्दा ठूलो खुशी साथ पढ्नुहोस्।
गत्ता टुक्रा चयन गर्नुहोस्। दुई-तरिका - यो उज्ज्वल र आदर्श हुनुपर्छ। एक पक्ष सेतो छ भने, त्यसपछि यो वा गोंद रङलगाएकोकागज रंग। गत्ता आधा गुना र यो फलाम ध्यान गुना। को परिधि साथ सुन्दर रिबन वा बेल गोंद। केन्द्र मा फूल को एक संरचना राख्नु। धेरै उत्सव नजर hyacinths। तिनीहरूलाई सरल बनाउन।
रंगीन कागज मा कटौती पाँच छ गर्न सेन्टिमिटर को चौडाई स्ट्रिप्स। विभिन्न रंग लिनुहोस्: नीलो, रातो, सुन्तला, पहेंलो। को निशान संग स्ट्रिप्स, को fringe र कैंची संग समाप्त कर्ल। हरियो कागज मोड को stems। अब, माथि देखि सुरु, तिनीहरूलाई रंग स्ट्रिप्स र्याप। संकलन र एक पोस्टकार्ड मा पेस्ट संरचना।
अब तपाईं आमा को लागि शिल्प कसरी बनाउने थाहा छ, त्यो एक लामो समय को लागि राख्नेछ। तपाईँ उनको प्रेम रूपमा कार्ड, र अन्य न्यानो शब्दमा लेख्न भूल छैन।
नरम तुलिप्स सी
सुन्दर कली ऊतक लिन, यो पोल्का डट्स वा फूल पनि हुन सक्छ। को बालाको र पात सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त मोनोक्रोम हरियो सामाग्री को लागि। पनि rigidity लागि तार, padding पलिएस्टर (फोम वा ऊन) आवश्यकता हो, कैंची, को कपडा र सुई मेल मुद्दा।
सुविधाको लागि, पहिलो ढाँचा कली, पात र स्टेम बनाउन। को कपडा र कट स्थानान्तरण गर्नुहोस्। एक फूल मा तपाईं दुई भागहरु आवश्यक याद गर्नुहोस्। एक स्टेम गर्नुहोस्। यो गर्न, सँगै कपडा को टुक्रा संलग्न र अनुहार सी। अब, तिनीहरूलाई बाहिर बारी तार सम्मिलित र फिलर tamp। त्यसै गरी कली र पात सी। मात्र तार आवश्यक छैन। सबै विवरण सँगै सी। Bouquet टाई रिबन, कागज मा पैक वा यो टोकरी मा राखे।
यो सानो मास्टर वर्ग आँखा खुसी लामो समय हो जो शिल्प जन्मदिन आमा, कसरी बनाउने प्रश्न निर्णय गर्नेछ। तपाईं कसरी सी थाहा छैन भने, आफ्नो हातमा एक कचौरा बनाउन। आमा शायद ताजा फूल प्रस्तुत हुनेछ, र एक उपहार सजिला छ।
आफ्नो हातमा एक कचौरा बनाउन
आधार को रूप मा, ग्लास जार, ग्लास वा एक विस्तृत घाँटी संग एक सुन्दर बोतल लिन। एउटा राम्रो विकल्प सजाने पत्रिका वा रंग खण्डहरूमा nesypuchey ऊतक देखि टाँस्न कतरन हुनेछ। पनि सजावट (बटन, मुद्दा, क्रिस्टल, आदि) को लागि गोंद र सजावट तयार।
सतह पोत आदर्श रक्सी वा नेल पलिश रिमुभर संग degreased गर्न आवश्यक छ। Okleivat टुक्रा माथि सुरु गर्नुहोस्। कागज मिल्दाजुल्दा लागू गर्न सकिन्छ भनेर याद, र कपडा - संयुक्त गर्न संयुक्त। त्यसैले सम्पूर्ण सतह भर्नुहोस्। तर एक राम्रो विचार एक कचौरा हेर्न, ठाउँ सजाउनु।
कसरी मेरो आमा खुसी पार्न बिहान?
तपाईं कसरी आमा गरेको मा शिल्प बनाउन थाहा छैन? स्याउ सैंडविच - उनको एक, स्वादिष्ट उपयोगी र असामान्य नास्ता खाना पकाउन! यो मीठो वर्तमान आहार भनिन्छ सकिएन, त्यसैले पनि एक आहार मा एक महिला को लागि, यो खाना पकाउन स्वतन्त्र महसुस।
तपाईं उचित आत्म स्याउ (ठूलो), एक चक्कु, एक सानो आवश्यक हुनेछ कुकी cutters (हृदय, फूल, र यति मा। डी), अनि सुकेको फल। वैकल्पिक, तपाईं बदाम मक्खन वा फल जाम, grated चकलेट, बादाम थप्न सक्नुहुन्छ।
स्याउ स्लाइस मा कटौती। एक को बीचमा बाहिर निचोड को कुकीहरू लागि फारम। स्याउ जाम को स्लाइस तेल, सुकेको फल र अन्य additives संग छिडकना। त्यसैले, सबै टुक्रा गर्छन्। एक स्याउ सर्कल अन्य राख्नु - को सैंडविच तयार छ! Zaserviruyte तरिकाले ट्रे, यो उपयोगी स्यान्डविच राख्नु, रस वा चियाको गिलास राख्न र सुत्न मेरो आमा सिधै लिन।
आमाहरु-एक मिठाई दाँत लागि शिल्प कसरी बनाउने?
कहिलेकाहीं केही कैंडी र चिया बैग एक अप एक महिला मज्जा गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यदि तिनीहरूले राम्रो wrapper मा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नै हातले मिठाई आयोजक बनाउन। यसो गर्न तपाईं चिया बैग, सानो चकलेट, कैंडी, रंग गत्ता, कागज, कैंची, गोंद र सुन्दर रिबन आवश्यक छ।
आधा गत्ता गुना। रंग कागज लिफाफें एक चिया र मिठाई बनाउन। तपाईंको आयोजक तिनीहरूलाई छडी। यस पक्षलाई सी वा सुरक्षित मिठाई पोस्टकार्ड बन्द गर्न सक्षम हुन रिबन बाँध। अगाडि सजाउनु र भित्र। को गोंद सुक्खा हुँदा, चिया बैग र चकलेट को pockets यसलाई सम्मिलित रिबन मा एक रिबन बाँध। अब तपाईं आफ्नै हातले आमाहरु लागि शिल्प कसरी बनाउने, र कुनै पनि अवसरको लागि उनको खुसी थाहा छ। खैर, यो आयोजक सी सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यो अब धेरै टिक्न हुनेछ।
प्लास्टिक काँटाहरू को प्रशंसक
Oddly पर्याप्त तर तपाईंले सुरुचिपूर्ण बनाउन र यस्तो पारंपरिक सामाग्री को एक प्रशंसक परिष्कृत गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ वा भित्री विवरण रूपमा भित्तामा झुन्डियो। यस्तो शिल्प को निर्माण लागि, गत्ता, डिस्पोजेबल काँटाहरू, टाँसन, बेल, साटन रिबन र सजावटी तत्व (फूल, माला, क्रिस्टल, आदि) तयार।
गत्ता देखि बाहिर दुई semicircles कटौती। एक छडी ह्यान्डल काँटाहरू। अब अन्य अर्धवृत कवर। दाँत मार्फत र गत्ता मा बेल पार। सुझाव चिपके। ठूलो धनुष वा फूल: को अर्धवृत को केन्द्र मा मात्रा सजावट राख्न राम्रो छ। थप सजावट प्रशंसक कल्पनाले मा पूर्ण रुपमा निर्भर हुन्छ। खैर, प्लग पनि कागज प्लेट वा अनावश्यक कम्प्युटर डिस्क मा टाँसियो गर्न सकिन्छ। फलस्वरूप, तपाईं छ जो दिन लज्जित एक धेरै राम्रो र मूल उपहार प्राप्त।
आमा को लागि शिल्प गर्नुअघि, यो उपयोगी हुन वा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ सावधान रहन। मात्र तरिका के तपाईं प्रेम एक खुशी पार्न ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ।
मास्को गरेको सर्वश्रेष्ठ cosmetologists: समीक्षा। मास्को मा व्यावसायिक cosmetologists
सेवन एकाइ: लाभ, बेफाइदा, assembling